သစ္စာအလင်း: ကျန်ကောင်းသင့်၏ (သို့မဟုတ်) ပညာအလင်း ပညာပါရမီအဖွဲ့ ပဉ္စမအကြိမ်လှူဒါန်းမှု
ကျန်ကောင်းသင့်၏ (သို့မဟုတ်) ပညာအလင်း ပညာပါရမီအဖွဲ့ ပဉ္စမအကြိမ်လှူဒါန်းမှု
* သင်သေသွားသော်…။ သင်ဖွားသောမြေ… သင်တို့မြေသည်..။ အခြေတိုးမြှင့်၊ ကျန်ကောင်းသင့် ၏။
* သင်၏အမျိုးသား၊ စာစကားလည်း၊ ကြီးပွားတက်မြင့်၊ ကျန်ကောင်းသင့်၏။
* သင်ဦးချ၍၊ အမျှဝေရာ၊ စေတီသာနှင့်၊ သစ္စာအရောင်၊ ဉာဏ်တန်ဆောင်လည်း ပြောင်လျှက်ဝင်းလျှက် ကျန်စေသတည်း။
ဆိုတဲ့ ဆရာဇော်ဂျီ ရဲ့ ကဗျာလေး ဟာ ကျွန်မ အတွက် အချိန်မရွေးကျရောက်လာမဲ့ သေခြင်း တရားအတွက် မရဏာနုဿတိ နဲ့ အတူ ကျန်ကောင်းသင့်၏ ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကို စွဲ မြဲရှင်သန်ဘို့ ခွန်အား သတ္တိဖြစ်စေ ခဲ့ရပါတယ်..။
ဤကဲ့သို့ ရှင်သန်နေသော အသိနဲ့ အတူ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ထွန်းညှိ တောက်ပစေခဲ့သော ပညာအလင်း ဓမ္မဒါန သင်တန်းလေး သည် ဖခင်ကြီးရဲ့ မွေးရပ်မြေ မှာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ လင်းလက်နေဆဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်…..။
ဒီသင်တန်းလေး ကို ဇွန်လ ၂၇ ရက် နေ့ ကစတင် ခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၁၂ ပတ်ကာ ကာလ ပြီးမြောက်ခဲ့ပါပြီ..။ စတင်ခဲ့စဉ်ကတော့ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရား ကြီး ၏ ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါးကန်တော့ခန်း စာအုပ်ကို သင်ရိုးအဖြစ် အသုံး ပြုပြီး တနင်္ဂနွေ အပတ်တိုင်း (၅) ပတ်တာ သင်ကြားခဲ့ ပါတယ်။
ဆဋ္ဌမ အပတ်မှာတော့ ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါး ကိုလက်တွေ့ပူဇော် ကန်တော့ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ကျွန်မက ဆရာတော်ဘုရား၏ မူရင်း တရားခွေ ကို Projector ဖြင့်ကလေးများကို နာယူစေရင်း ကန်တော့ခဲ့ ကြပါတယ်။ သစ်သီးပွဲများ လှူဒါန်းခြင်း ကို ရွာခံ ကျွန်မ ရဲ့ ဝမ်းကွဲအမဆရာမ များ က ပြင်ဆင်ပေးထားကြပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပူဇော် ကြရင်း ဖြင့် ထမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်..။
ထိုနေ့က သင်တန်းသားကလေး များ ကတော့ ဝါဆိုသင်္ကန်းတစ်စုံ ဝယ်ယူထားတာမို့ သင်တန်း လက်ခံ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုတဲ့ ဆရာတော် နဲ့ ကျောင်းနေသံဃာ ငါးပါး ကို ဝါဆိုသင်္ကန်း နဲ့ နဝကမ္မဝတ္ထုငွေ ၁၅၀၀၀-ကျပ် ကိုအတူတကွ ကပ်လှူပူဇော် ခဲ့ကြပါတယ်….။ အဲဒီနေ့ကတော့ မနက် ၈နာရီခွဲကတည်း က ကျွန်မ နှင့်အတူ သားကြီး ကိုဥဂ္ဂါ ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီး ကျွန်မ အလုပ်ရှုပ်နေချိန်မှာ သားကြီးကပုံပြော ကဗျာရွတ်ဆိုပြသ သင် ပေးရင်း နဲ့ ကလေးများပျော်ရွှင်စွာ လိုက်နာ သင်ယူခဲ့ကြပါတယ်..။
အားလုံးကန်တော့ပြီးချိန်မှာတော့ နေ့လည် ၂နာရီခွဲနေခဲ့ပါပြီ….။ တစ်နေကုန်နီးပါး ဖြစ်ခဲ့ရတာမို့လည်း ပဲမုန့် နှင့်လဘက်ရည် တိုက်ကျွေးမဲ့အလှူရှင် လည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်..။
ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါး သင်ကြားပြီစီးချိန် မှာတော့ ကျွန်မ ရဲ့ သင်တန်းသားလေးများ ဟာ ပြစ်မှား ကံ အမြစ် အငုတ်များ တူးဆွ ဖေါ်ထုတ်ရှင်း လင်းပြီး မြေညှိထားတဲ့ မြေကွက် ညီညီလေး လို ခံစားပုံသွင်း မိပါတယ်…။ ဒါဟာ မြင့်မားခိုင်ခန့်တဲ့ အဆောက်အဦကောင်း အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ် စေမှာ အမှန်ပါပဲ..။
ဒါကြောင့်ဒုတိယ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အဖြစ် ၂၄ပစ္စည်း ပစ္စယ နိဒ္ဒေသ ပဋ္ဌာန်း ပါဠိတော်ကို အလွတ် ရွတ်ဆို ပူဇော် နှုတ်တက်ဆောင်နိုင်စေရေး သင်ကြားပေးခဲ့ ပါတယ်..။တူရာများကို စုစည်းပြီး လွယ်ကူစွာ ကျက်မှတ်ပူဇော် နိုင် စေတဲ့ အတိုကောက် မှတ်စုလေးကိုတော့ ထေရဝါဒ လူငယ်လေးများအဖွဲ့ က ကိုဦးနှင့်ကိုသုခ တို့ ပေးပို့ထားတဲ့ စာရွက် အတိုင်းသင်ကြား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
အခု ဆိုရင် တစ်ဝက် နီးပါး အာဂုံဆောင် နိုင်ကြပြီ ဖြစ်လို့ ဒီအပတ်မှာတော့ ပြန်လည် စိစစ်စစ်မေးမဲ့ အစီအစဉ် ကို ကျွန်မ စီစဉ် ထား လိုက်ပါတယ်..။ ပဋ္ဌာန်း အာဂုံဆောင်သင်တန်းပြီး ဘို့ စက်တင်ဘာ လကုန်မှာ ရည်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်..။
အောက်တိုဘာ လဆန်း မှာတော့ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ ရဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်း ကို ဆရာတော် ရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတန်းစာအုပ်များ အတိုင်းသင်ကြားပေးရန် စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီသင်တန်း လေး သက်တမ်းရှည် ကြာစွာရပ်တည် ပြီး သစ္စာ ဉာဏ်ရောင် ၊ တောက်ပြောင် စေရေးအားပေးကြသူများစွာရှိပါတယ်။ ထိုသူတွေ ရဲ့ အားပေးမှု မပါဝင်ပဲ အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ အောက်ပါ အလှူရှင် များရဲ့ ထက်သန်သော စေတနာ သဒ္ဓါတရားကို အလေးအမြတ်ပြု ၍ သာဓုခေါ် ဆိုလိုက်ပါတယ်..။ ကျွန်မ နဲ့ အတူ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြ ပါစေရန်လည်းအားလုံးရဲ့ ကိုယ် စား မေတ္တာ အမျှ ပေးဝေ ငှ လိုက်ပါရစေရှင့်..။
၁။ မထက်စုနှင်းဆီ (သစ္စာတရားများစုဝေးရာ- New York , USA)- US$ 30
၂။ ဒေါ်ဌေးဌေးစိန် မိသားစု- ၂၀၀၀၀ ကျပ်
၃။ ဒေါ်သစ်သစ်ဝင်း မိသားစု- ၅၀၀၀ ကျပ်
၄။ မကျော့ကေကေခိုင်- ( Piavate Hospital, Bangkok)- ၁၀၀၀၀ ကျပ်
၅။ မနီတာမြင့် (ဌာနစုမှူး-နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန) - ၁၀၀၀၀ ကျပ်
6. Kaori ( Htet Myat Aye) Primary6Singapore $ 30
7.Maung Aung Thuya Oo Primary6- Singapore $ 20
8. Konica( De Par Lyuone Oke) Secondary4Singapore $ 20
9. Kyaw Toe Khant Primary2- Singapore $ 20
10. Mya The Pwint - Primary5- Singapore $10
ဤသို့သော စေတနာ တရားတို့ဖြင့် သစ္စာ အရောင်၊ ဉာဏ်တန်ဆောင်လည်း ပြောင်လျှက်၊ဝင်းလျှက် ကျန်ရစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။ သာဓု-သာဓု- သာဓု
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 11:48 PM
ဘဝအမောတွေပြေတဲ့နေ့ (သို့မဟုတ်) သမီးလေးအတွက် မွေးနေ...
ကျန်ကောင်းသင့်၏ (သို့မဟုတ်) ပညာအလင်း ပညာပါရမီအဖွဲ့...